UMMAD WALIBA AAYAHEEDA INEY KA TASHATO IYAGAY U TAALAA.
Aniga oo magaceyga la yiraahdo Malyuun Elmi Abdilaahi, kana soo jeeda beesha Samaroon ee degen gobolada Awdal, Salal iyo Gabiley. Waxan marka hore mahadnaq weyn u celinayaa dhamaan dhalinyaradii iyo haweenkii ka hadashey saxaafadda Borama fikirkoodana ka dhiibatey sida ay u arkaan gooni isu taaga Awdal State oo dhawaan lagaga dhawaaqey dunida dacaladeeda. Waxa beryahan saxaafadda laga baahiyaa warar ku saleysan been abuur,iyo iska horkeen beelo walaalo ah oo wada degen.Taasi oo dhalisey kacdoono, iska horimaaad, iyo keli tashid beelaha dhexdooda. Hadhwanaag oo ka mid ah saxaafadaha kuwa loo adeegsado si ay isaga horkeenaan beelaha Samaroon ayaa maalmo dhaweyd soo baahisey wareysiyo khaas ah oo ay la yeesheen dhalinyaro iyo haween ay sheegeen in ay ka soo jeedaan gobolka Awdal.
Wareysigaas oo u dhignaa mid runta aad uga fog, ahaana wareysi dad isku fikir iyo aragti ah. Saxaafadaas oo isugu biyo shubatey, cadeysateyna in ay tahey mid raadisa danaheeda gaarka ah baahisana warar been ah, isna moodsiisa fikradaha kale ee dadka badankiisu qabaan, taas oo hoos u dhac weyn ku keentey qiimaheedii saxaafadeed.
Waxaan wada ogsoonyahay in maamul goboleedka somaliland ay aad isugu hawlaan sidii ay u kala fogeyn lahaayeen beelaha Samaroon, iyagoo adeegsanaya masuuliyiin ka soo jeeda gobalada Awdal, Salal iyo Gabiley,oo danahooda gaarka ah ka hormarinaya danta guud ee Samaroon. Aniga oo qaba , xaqiiqaduna tahay in xaqii iyo saamigii samaroon lahaa La tirtirey oo balanqaadyo aan la fulineyn lagula dhaqmaayo Odayaasha Iyo Salaadiinta ka soo jeeda Beelaha Samaroon ayaa dhalisey in ay isu Tagaan oo aayahooda ka tashadaan.
GOD BLESS AWDAL STATE.
MALYUUN ELMI ABDILAAHI.